Astaanta Birta Culus: Fikradaha iyo Tusaalooyinka Astaanta Birta Culus | Hal-abuurka khadka tooska ah
calaamad bir culus
Nerea Morcillo | 01/05/2022 15:00 | Design Graphic, General
Waxaa jira nooc muusiko ah oo fayras ku socday tobanaan sano. Nooc ka mid ah kuwa kuu soo tebiya adduunka tamarta iyo dareenka tamarta. Dad aad u tiro yar ayaa garanaya taariikhdeeda, sidaas darteed, qaar badan oo ka mid ah dadka u heellan naqshadaynta garaafyada ayaa fahmi doona muhiimadda isgaarsiinta ee awood u leh in ay dhaliso wax ka badan ama ka yarayn birta culus.
Maqaalkan, kaliya kuma soconeyno inaan ku soo bandhigno taariikhda birta culus, laakiin sidoo kale waxaan u soo jeedinay miisaska si aan kuu saadaalino. suurtogalnimada in aad si fiican u naqshadayn karto astaantaada birta culus, iyada oo aan wax tafaasiil ah ka tagin, oo ay ka sii muhiimsan tahay, taas oo leh hal-abuur iyo shakhsiyad badan.
1 Bir culus: waa maxay
2 Calaamadda birta culus: fikradaha iyo talooyinka
2.1 Tallaabada 1: Cilmi-baadhis
2.2 Talaabada 2: Sawir
2.3 Talaabada 3: Wax ka beddel summadaada
3 Tusaalooyinka calaamadaha birta culus
3.3 hoggaamiyo Zeppelin
3.4 Iron xaasnimada
Bir culus: waa maxay
Xigasho: The World Order
Birta culus waxaa lagu qeexaa inay tahay mid ka mid ah noocyada muusiga ee badan ee maanta jira. Laakiin gaar ahaan, waa nooc ka mid ah nooc ka mid ah oo ay dhiirigelinayaan inta taariikhda la joogo noocyada kale. sida blues rock, 60-yadii aashitada rock, iyo xataa in badan oo ka mid ah muusiga qadiimiga ah Waxa uu noqday mid aad ugu baraarugsan hab-muusigiisa.
Noocani waxa uu dhashay oo bilaabmay dhamaadkii 60-kii, waxa saamayn wayn ku yeeshay kooxo kala duwan oo ku guulaystay in ay wacyi galiyaan oo fuliyaan noocaan una gudbiyaan heerar iyo heerar waaweyn. Waa nooc muusik ah Waxa ay sumcad weyn ku lahayd waddamo ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Maraykanka. Waxay ahayd ilaa 80-meeyadii markii biraha culus ay bilaabeen inay helaan caannimada ay u qalmaan.
Qaar ka mid ah aaladaha ka muuqda biraha culus waa: baytariga inta badan leh durbaan bass labanlaab ah oo lagu dhex daray si uu u bixiyo awood iyo tamar badan oo codka ah, bass, gitaarka laxanka, gitaarka kelida ah iyo kiiboodhka. Qalabkani waa mid aad muhiim u ah, tan iyo waxay qayb ka yihiin dhammaan dabeecadda iyo shakhsiyadda birta culus.
In badan oo ka mid ah sawirka mashaariicda birta culus, wuxuu ka soo qaatay daboolka qaar badan oo albamadiisa ah, Calamadaha ayaa sidoo kale ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee xiisaha leh, kuwaas oo sidoo kale lagu daro bandhigyada, dharka ay inta badan xirtaan fanaaniin iyo fannaaniin badan, si ay ugu matalaan kooxda habkan iyo qaar ka mid ah muuqaalada muusikada ee taariikhda la sameeyay. taasina waxay noqotay mid aad loo jecel yahay, gaar ahaan xagga fanka.
Cunsurka kale ee ka soo baxa birta culus ma timaha mise timaha fanaaniinta, badankoodu waxay isticmaalaan timo dhaadheer, toosan oo xad dhaaf ah. Waa mid ka mid ah astaamaha ay tahay in farshaxan kasta oo bir culus ahi uu haysto. Tani waxay ka timid dhaqan-hoosaadka hippie oo qaar badan oo iyaga ka mid ah ay qaadanayeen taariikhda oo dhan oo hadda noqotay calaamad weyn.
Ugu dambayntii, waxa kale oo ay iftiiminaysaa in wakhtigaas, halabuuro iyo kooxo badan, waxa ay bilaabeen in ay is qurxiyaan si ay u matalaan muuqaalkiisa ku wajahan shacabkiisa go'aansan. Arrin aad uga yaabisay xilligaas.
Calaamadda birta culus: fikradaha iyo talooyinka
Tallaabada 1: Cilmi-baadhis
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo ka hor inta aanad naqshadayn astaanta waa inaad samayso cilmi-baaristaada. Markii hore waxaan u sharaxnay nooca noocaan ah iyo qaar ka mid ah sifooyinkiisa ugu caansan. Si kastaba ha ahaatee, Waxaa muhiim ah in aan sidoo kale u daadagno dhinacyo kale, sida taariikhdeeda. Waynu ognahay waxa ay tahay birta culus balse ma aha halka ay ka timi iyo sida ay u kobcaysay intii u dhaxaysay 60kii ilaa 80aadkii.Waxa kale oo muhiim ah in aynu kala saarno curiyayaasha ugu muhiimsan marka aynu ka hadlayno nooc aad u yaqaanay sida loo kala saaro. si fiican. inta kale.
Sababtaas awgeed, waxaa aad muhiim u ah oo xiiso leh in la sameeyo daraasad horudhac ah oo ku saabsan calaamadaha ay leeyihiin kooxaha qaar ee aan naqaanno. Tusaale ahaan Metallica. Barashada astaanta Metallica waa wax fudud. Marka aan ka hadlayno barashada ama falanqaynta sumadda waxaan ka hadalnaa, dib u eegis oo aan ka soo saarno gabagabadayada waxyaabaha caanka ah sida qoraalka: Miyay adeegsadaan qoraal qoraal ah oo halis ah ama ka firfircoon? Midabbadu miyay madow yihiin mise sidoo kale waa la wadaaga oo ka duwan yihiin kuwa fudud? iwm. Kahor intaadan bilaabin, waa lagama maarmaan in la yeesho aqoon guud oo kaa caawin doonta wejiyada kale.
Sida caadiga ah, calaamadaha biraha culus waxaa badanaa lagu go'aamiyaa hooska aadka u madow: madow iyo cawl. Wajiyada nooca loo yaqaan 'Typefaces' ayaa inta badan soo saara dareen tamar iyo awood ku wajahan daawadayaasha. Sidaa darteed, waa inaad doorataa font iyo midab soo jiidanaya dareen badan.
Talaabada 2: Sawir
Marxaladda sawir-gacmeedku waa wejiga ugu weyn ee dhammaan. Laga soo bilaabo halkan dhammaan fikradaha ugu horreeya waxay ku bilaabmaan qaabka sawirada oo maskaxdeenu si tartiib ah u shaqeyso, sidaas awgeed, si dhakhso ah u socodsiiso. Marka hore waa in aan haysanaa hage ama tixraac waxa macmiilku rabo, kiiskan, haddii macmiilku yahay nafteena. Waa inaan fulinaa nooc warbixin kooban oo leh tilmaamo ama ujeeddooyin aan rabno inaan u dejino astaantaas.
Marka aan caddayno sida aan rabno inaan u matalo astaantayada, waa inaan u gudubnaa naqshadeynta. Si aad u sameyso si ka wanaagsan, Waxaan kugula talineynaa inaad raacdo saddex waddo oo kala duwanWaddooyinku waa nooc ka bixitaan oo sifooyin kala duwan leh, laakiin dhammaantood, isku day inaad matasho waxaad rabto. Habka ugu horreeya wuxuu noqon karaa in lagu shaqeeyo kaliya qoraalka, iyada oo aan lagu darin wax kale. Habka labaad wuxuu noqon karaa in lagu daro curiye ka soo jeeda kuwa kale, ta saddexaadna waxay noqon kartaa dhinac kale.
Talaabada 3: Wax ka beddel summadaada
Marka aan samayno sawir-gacmeedyada oo aan dooranno mid, waxaa muhiim ah in aan u soo bandhigno muuqaal macquul ah. Tani waa marka aan digitize ka samayno barnaamijyada qaar sida Illustrator ama Photoshop. Waa muhiim in calaamaddu ay leedahay natiijo shaqaynaysa oo ay leedahay hab-dhaqanka iyo dabeecadda astaanta. Xaaladahan waxa ay noqon doontaa mid xiiso leh in lagu daro hadh yar xagga qoraalka si loo xoojiyo magacaabista kooxda.
Tusaalooyinka calaamadaha birta culus
Calaamadda dhunkashada caanka ah waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan taariikhda birta culus. Si aad u badan, in ay noqotay calaamad ka mid ah noocyadan oo ka kooban kumanaan iyo kumanaan dhegaystayaal ah. Ujeedada nashqaddeedu waxay ahayd inay matasho qoraal-gacmeed oo astaan ​​u ah muuqaalka hillaaca. Wax uu nashqadeeyaha lahaa dhibaatooyin waaweyn maadaama uu naqshadiisu aad ula mid ahayd tii la isticmaali jiray xilligii Nazi-ga. Waxa lagu qasbay inay wax ka beddelaan.
Birta hillaaca waa shay aad caadi u ah oo ka mid ah calaamadaha qaarkood, maadaama ay bixiso koronto iyo tamar, laba dhinac oo aad ugu xiran noocaan.
Calaamadda Van Halen waa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu caansan dhammaan kuwa ku jira birta culus. Waa mid ka mid ah kuwa isbeddellada ugu badan ku dhacay sidoo kale, taas oo ka dhigaysa koox caan ka ah dhegaystayaasheeda. Isbeddelkii ugu horreeyay ee soo gaaray wuxuu la xiriiray beddelka labada fannaan ee ugu waaweyn kooxda, kaas oo lagu qasbay in lagu daro V iyo H bilowga ah ee sumadda. Waxa jira albamooyin ay wali summada khuraafaadka ku kaydsan tahay.
Shaki la'aan mid ka mid ah kooxaha, haddii aad qof weydiiso waxa ku saabsan, waxay kuu sheegi doonaan inay si fiican u garanayaan. Waa mid ka mid ah kooxaha birta culus, mana aha oo kaliya la yaab leh heesaheeda tirada badan iyo albamada, laakiin sidoo kale naqshadeeda astaanta.
Astaantu waxay muujinaysaa sawirka mid ka mid ah farshaxannada uu sameeyay fannaanka Maraykanka ah ee William Rimmer, inkasta oo qaar badan oo ka mid ah kuwa ku hareeraysan kooxdan ay la xiriireen sawirka Apollo, oo ah ilaahii Giriigga ee matala iftiinka iyo muusikada.
Iyo in la soo afjaro liiska tusaalooyinka, tusaale kale oo cajiib ah ayaa la waayay, sida kooxda caanka ah ee birta culus, Iron Maiden. Astaantu waxay aad ugu egtahay astaanta Metallica ee jaleecada hore. Si taas loo sameeyo, waxay adeegsadeen qoraal-qoris tamar leh oo cajiib ah. Waxa kale oo ay isticmaaleen kala duwanaanshiyaha midabka shirkadda oo guduudan oo xoogaa ka muuqda astaanta.
Shaki la'aan, naqshaddu waa mid shaqaynaysa, iyo sida laga soo xigtay qaar ka mid ah taageerayaasha iyo wakiilada, naqshadeeyaha ayaa dhiirigeliyay boodhka Vic Fair ee filimka caanka ah "Ninkii dhulka ka dhacay".
Biraha culculus waa nooc si aad ah caan u noqday sannadihii u dambeeyay. Run ahaantii, waxaa jira dhismayaal aad iyo aad u badan oo ixtiraamaya noocaan, waxaa jira xitaa meelo kaliya oo muusikada noocan oo kale ah la maqlo.
Shaki la'aan, waxa ugu muuqda, sida aan soo aragnay, waa calaamadaha ama naqshadaha daboolka albaabka. Nashqado, jaleecada hore, u roga noocaan qaab cusub oo farshaxan.
Waxaan rajeyneynaa in aad wax badan ka baratay muusikada noocaan ah iyo in ka sii badan, in aad dhiirigelisay qaar ka mid ah calaamadaha aan ku tusnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » calaamad bir culus
Qaababka loo qoro cunto karinta ee Word